နောင်လာနောက်သားတွေကာလများတွင် နိုင်ငံတော်ကြီးအကြွေးပင်လယ်မှာမနစ်မြုပ်စေဖို့ သတိထားကြရပါလိမ့်မယ် ဟု တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ပြောကြား – iSeeMedia
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဘက်ဂျက်လိုငွေပြမှုသည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေသည့်အပြင် လိုငွေ ဖြည့်တင်းရေးမူဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ခိုင်မာတောင့်တင်းမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားချေးငွေအား ချေးယူနေမှုကို သတိထားချေးယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်နောင်လာနောက်သားများ၏ကာလများတွင် နိုင်ငံတော်ကြီးအကြွေးပင်လယ်တွင် မနစ်မြုပ်စေရန် သတိထားကြရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးနိုင်မြင့်က ပြောကြားသည်။
“ချေးငွေအခွင့်အလမ်းတွေ ဘယ်လောက်ကောင်းလို့ နိုင်ငံတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် ဘယ်လောက်လိုအပ်လို့ဆိုပြီး ချေး ယူပေမယ့် ကျနော်တို့ကာလမဟုတ်တဲ့ နောင်လာနောက်သားတွေကာလမှာ အကြွေးပင်လယ်မှာ နိုင်ငံတော်ကြီး မနစ်မြုပ်စေဖို့ သတိထားကြရပါလိမ့်မယ်” ဟု တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးနိုင်မြင့်က ပြောကြားသည်။
ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဟု ဖာပွန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် ဦးစောထွန်းမြအောင်၏ “ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက လူတိုင်းအကျုံးဝင် အရည်အသွေးမီ ပညာရေးလုပ်ငန်းအစီ အစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့(IDA) ထံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းတစ်ရာ ချေးငွေရယူရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျှဉ်းဆွေးနွေးစဉ်”နှင့်ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်သို့တင်ပြမှုတွင် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးနိုင်မြင့်က ပါဝင်ဆွေးနွေးစဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လွှတ်တော်မှခွင့်ပြုခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားချေးငွေများသည် လွှတ်တော်သက်တမ်းများတွင် ချေးယူမှုများရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ချေးယူသည့် နိုင်ငံခြားချေးငွေ ၂၂၂၃. ၃၃၅ ဘီလီယံသည် ချေးယူမှုပမာဏအများဆုံးဖြစ်နေသည့် အပေါ် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးနိုင်မြင့်က ဆွေးနွေးရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလို ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းဆက်တိုက် ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြနေခြင်း၊ လိုငွေဖြည့်တင်းရေးမူဝါဒ ခိုင်မာ တောင့်တင်းမှုမရှိခြင်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံကို နိုင်ငံခြားချေးငွေကိုသတိထားချေးယူရပါမယ်။ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားချေးငွေ ၂၂၂၃. ၃၃၅ ဘီလီယံနှင့် အများဆုံးချေးငွေ ဘီလီယံဆိုတာကိုလည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရပါမယ်” ဟု တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးနိုင်မြင့်က ပြောသည်။